माइक्रोसफ्टलाई ‘नो’ भनेको टिकटकले ओराकललाई ‘एस’ भन्ला ? यस्तो छ सम्भावना « Bizkhabar Online
माइक्रोसफ्टलाई ‘नो’ भनेको टिकटकले ओराकललाई ‘एस’ भन्ला ? यस्तो छ सम्भावना
14 September, 2020 2:41 pm
काठमाडौं । लोकप्रिय चिनियाँ भिडियो–सेयरिङ एप्लीकेसन टिकटकले आफ्नो अमेरिका व्यवसाय अमेरिकी कम्पनी ओराकललाई बिक्री गर्ने संकेत दिएको छ । टिकटकको अमेरिका व्यवसाय खरिद गर्ने बारेमा माइक्रोसफ्टसँग लामो वार्ता भए पनि अन्ततः त्यो पहल समाप्त भएको माइक्रोसफ्टले जनाएको छ ।
माइक्रोसफ्टले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकटकको मुख्य कम्पनी बाइटडान्सले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जनाएको छ । अमेरिकी सूचना चुहावटको आशंका जनाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकको अमेरिकामा हुने व्यवसाय अमेरिकी कम्पनीलाई बिक्री गर्न आदेश नै दिनु भएको छ । उहाँले आगामी सेप्टेम्बर २० भित्र टिकटकले निर्णय नगरे अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् ।
बाइटडान्स र अमेरिकी कम्पनीबीच हुने किनबेचका सम्बन्धमा अमेरिकाको विदेशी लगानी समितिले मूल्यांकन गरेपछि मात्र अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । टिकटकका अनुसार संयुक्तराज्य अमेरिकामा १० करोड र विश्वभर ७० करोड ग्राहक रहेका छन् । यस एप्लीकेसनको स्वामित्व चिनियाँ नागरिकमा रहेकाले पनि अमेरिकामा विशेष चासो दिइएको हो ।
ह्वाइट हाउसले टेलिकम कम्पनीहरु हुवावे र जेडटिई, विच्याट समेतका निकै लोकप्रिय एप्समाथि शृंखलाबद्ध प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिरहेको छ । टिकटक खरिदमा अग्रपंक्तिमा देखिएको ओराकलले खासगरी डेटाबेस सफ्टवेयर निर्माण गर्दछ ।
गरिबभन्दा धनी बढी फोहोरी ! विश्वका सर्वाधिक धनी १ प्रतिशतले फैलाए अति गरिबकोभन्दा ५० गुणा बढी प्रदुषण
काठमाडौं । विश्वका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत मानिसले गर्ने कार्बन प्रदूषण विश्वका सबैभन्दा गरीब करिब
कोरोना कहर : विश्वभर २ करोड २५ लाखले जिते कोरोना, यस्तो छ मृतक र संक्रमितको पछिल्लो तथ्यांक (अपडेट)
विश्वभरी सङ्क्रमित मध्ये दुई करोड २३ लाखले जिते कोरोना, नौ लाख ५६ हजार बढीले ज्यान गुमाए(अपडेट)
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसका कारण संसारभरी अहिलेसम्म पौने चार करोड मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भने ती